Tu Tu Tha: အာကြီး သေပြီ
ကျမ ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ပြီး အာဆင်နယ်အကြောင်းများလား လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဘောလုံး အကြောင်း ဘာမှ မသိပါ။
အဘွားမိနှင့်ဘိုးပါတို့ သန်လျင်ရောက်လာခါစက သူတို့လင်မယားကို ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီတဲ့၊ စံပြ လင်မယားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြတယ်။ အဘွားမိက ကမာရွတ်ဒေါ်သာထက်ကျောင်းက ကျောင်းဆရာမ ဟောင်း၊ အဘိုးပါက ရှေးခေတ်နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားဟောင်းတဦး။ အဘွားမိ၊ အဘိုးပါ လို့သာ ခေါ်ပေမယ့် အဲဒီတုန်းက သူတို့အသက်တွေ ၅၀ ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိမယ်။ ကျမတို့က ကလေးတွေကိုး။
သူတို့မှာ သားထောက်သမီးခံမရှိ။ အဘိုးပါရှာဖွေထားသမျှလေးနဲ့ သန်လျင် ကျောင်းလမ်းမှာ ခြံတကွက် ဝယ်၊ အုတ်ခံ ပျဉ်ထောင်အိမ်ကလေးကောင်းကောင်း ဆောက်နေကြတယ်။ အဘိုးပါဆီမှာ ဘီအက်စ်အေ ဆိုင်ကယ်ကြီးတစီးရှိတယ်။ သူတို့အိမ်က ကျမတို့ ဘုရားကျောင်းနဲ့ ကျောချင်းကပ်။ ဒါက နောက်ပိုင်း အပိုင်ဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်။ ပထမသန်လျင်ရောက်ခါစက ငှားနေတဲ့ အိမ်က ဘုရားကျောင်းနဲ့ မျက်စောင်း ထိုးမှာ။ အဘိုးပါက ဘုရားကျောင်း ကိစ္စမှန်သမျှ တတ်စွမ်းသလောက် ကူညီသူ၊ ကျမတို့ သင်းအုပ် ဆရာ ဖေဖေတူးတူးက အသင်းတော်သူ အသင်းတော်သားတွေ အိမ် လှည့်လည်ရင် အဘိုးပါက ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်ပို့တာ။ အဘိုးပါက ဖေဖေတူးတူးထက် နည်းနည်း ငယ်မယ် ထင်တယ်။ အဘွားမိကတော့ အမျိုးသမီး အသင်းမှာ ဦးဆောင်သူ၊ သီချင်းအဆို ကောင်းတယ်။ အထူးသဖြင့် အဘွားမိက ကွာယာဆိုရာမှာ ဒုတိယသံ (Alto) ဆိုလေ့ရှိတယ်။
တနေ့တော့ သူတို့ သမီးတယောက်ကို မွေးစားလိုက်တယ်။ ထိုသမီးနာမည်က မအေးမြင့်တဲ့။ ကျမထက် ၇ နှစ်လောက် ကြီးမယ်။ သူ့ကို အားလုံးက ဘာလို့လည်းမသိ အာကြီးဟု ခေါ်ကြတယ်။ ဒီတော့ ကျမတို့ကလည်း အာကြီးပေါ့။ သူကလည်း ဘုရားကျောင်းဝေယျာဝစ္စ မှန်သမျှ မညည်းမညူ ကူညီတတ်သူ။
အဘွားမိတို့ သန်လျင်ရောက်လာပြီး မကြာ ... သူတို့ ငှားနေသည့် အိမ်ဘေးအိမ်က ကိုပေါက်စ မမီးမီးတို့မှာ တတိယမြောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါရော။ အဲဒီကိုယ်ဝန်ကို အဘွားမိနဲ့ အဘိုးပါတို့က မွေးစားချင်တယ်လို့ တောင်းတယ်။ ကိုပေါက်စတို့ကလည်း သိပ်ပြေလည်သူတွေ မဟုတ်ကြ။ အဲဒါထက်ကို အဘွားတို့ အဘိုးတို့ကို ကိုယ့်သွေးရင်းလို ခင်နေကြတာဆိုတော့ “ပေးပါမယ်” ဆိုပြီး နှုတ်ကတိပေးလိုက်ကြတယ်။ သားလေး မွေးတယ်။ တကယ်လည်း ပေးလိုက်တယ်။ ပေးလိုက်တယ် ဆိုပေမယ့် အဖေရင်း အမေရင်းနဲ့လည်း ဝေးကွာတာ မဟုတ်။ ဘာမှထွေထွေထူးထူး ပြောနေစရာမလို၊ အဖေရင်းအမေရင်းက ဒါ၊ မွေးစားအဖေအမေဆိုပေမယ့် အဖေ အမေရင်းထက်မချား ချစ်သူတွေက ဒါ ဆိုပြီး ထိုသားက သိတယ်။ သူ့နာမည်က ချစ်ကောင်းတဲ့။ ဒီတော့ အဘိုးပါနှင့် အဘွားမိမှာ သားတယောက် သမီးတယောက်နဲ့ စိုပြေသွားပြီ။ အဘိုးကော အဘွားပါ ဒီသမီးနဲ့ သားကို သိပ်ချစ်တယ်။ အာကြီးကလည်း သူ့မောင်လေးကို သိပ်ချစ်တယ်။ သူတို့မိသားစုက အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါပဲ။
တနေ့မှာတော့ အဘိုးပါ အပြင်ကနေ ဆိုင်ကယ် တဘုန်းဘုန်းနှင့် ပြန်လာတယ်။ မျက်နှာက မကောင်း။ အဘွားမိ က ယောက်ျားလုပ်သူကို မျက်နှာကဲ အမြဲ ခပ်နေသူ ဆိုတော့ မေးလိုက်တယ်။
“ကိုပါ ... ဘာဖြစ်နေတာလဲ မျက်နှာလည်း မကောင်းဘူး”
“မမိ ... မင်း ငါမရှိတော့ရင် ကလေးနှစ်ယောက်ကို ဂရုစိုက်ပါကွာ၊ အထူးသဖြင့်တော့ ငါ့ သားလေးပေါ့။ သူက ကလေးပဲရှိသေးတာ”
“အခုလည်း ဂရုစိုက်ပါတယ် ကိုပါရယ်။ ရှင်ကလည်း ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ဘာလို့ ဒီလိုစကားတွေ ပြောနေ ရတာလဲ”
“မဟုတ်ဘူး၊ ငါ သိနေတယ်။ ငါ့ကို ကတိပေးပါကွာ နော်”
“ဟုတ်ပါပြီ၊ ကတိပေးဆိုလည်းပေးတယ်။ ရှင်က ဘာဖြစ်နေရတာလဲ ပြောပြ”
“ငါ ... ငါ့မျက်လုံးတဘက် ဝါးနေပြီ မမိရဲ့ ... ငါ မနေရတော့ဘူး ... ငါ့ကိုယ်ငါသိတယ်”
“မှန်းစမ်း ... အောင်မလေး ကိုပါရယ်”
အဲဒီလိုပြောပြီး အဘွားမိတို့ ရီလိုက်တာမှ ခွက်ထိုးခွက်လန်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဘိုးပါက မျက်စိ တဘက် ဝါးနေမှာပေါ့။ ဆိုင်ကယ်စီးရင် မျက်မှန်က မှန်တဘက် ကျွတ်ထွက်နေတာ သူ့ဘာသူ သိမှ မသိဘဲ။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီး ၁၀ နှစ်လောက်ထိ အဘိုးပါ မသေပါဘူး။ ချစ်ကောင်းလေး ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် မှာတော့ အဘိုးပါ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ အဘွားမိကတော့ ဒီသားနဲ့ ဒီသမီးကိုပဲ ဖက်တွယ် ကျန်ခဲ့တာပေါ့။
ခုတော့ ချစ်ကောင်းက လူပျိုကြီး ဖားဖားဆိုတာထက်တောင် ကြီးနေပြီ။ ကုမ္ပဏီကြီး တခုမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း မိသားစုအတွက် ဝင်ငွေရှာပေးသူတောင်ဖြစ်နေပြီ။ အာကြီးကလည်း သူ့မောင်ကို ချစ်လိုက်တာ သည်းသည်း လှုပ်။ သူ့မောင်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ သူ့မောင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ အာကြီးက ဒဏ်ခံတာ။
ချစ်ကောင်းတို့သူငယ်ချင်းတသိုက်က သီချင်းဆို ဝါသနာပါကြတယ်။ အဘွားမိက အသက် ၇၀ ကျော်လာပြီ ဆိုတော့ စောစောစီးစီး အိပ်ရာဝင်ပြီ။ ချစ်ကောင်း ညဘက်ပြန်မလာသေးရင် အာကြီးက စောင့်တယ်။ အိမ်ရှေ့မှာ ချစ်ကောင်းတို့ တသိုက် ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုကြရင် အာကြီးက ပက်လက်ကုလားထိုင် တလုံးနဲ့ ထိုင်နားထောင်တယ်။
အာကြီးက နေ့ခင်းဘက် ထမင်းဟင်း ရောင်းတယ်၊ အိမ်ရှေ့မှာက အထက်တန်းကျောင်းရှိတော့ ရောင်းရတယ် ဆိုပါတော့။ ကျမက သူတို့ မောင်နှမတွေအကြောင်း ဝတ္ထုတိုလေးတွေ ရေးဖူးတယ်။ အာကြီးရဲ့ အသုတ်က ကောင်းလွန်းလို့ ကျမတို့က အလွယ်တကူ “အာကြီးသုတ်” သွားစားမယ် ဆိုပြီးပြောတာကို မသိတဲ့သူတွေက အာကြီးသုတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့်လို့ မေးရတဲ့အထိ။
ချစ်ကောင်းကျတော့တမျိုး။ ဒီကောင်က လေနည်းနည်းကျယ်တယ်။ ပြောရင်းနဲ့ လက်လွန်လွန်သွားတတ်တာပါ။ ဥပမာ ကျမတို့က ၈၈ အရေးအခင်းအကြောင်း စကားစပ် ပြောကြတယ်ဆိုပါတော့။ အားလုံးက ၈၈ မှာ လူငယ် အရွယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေချည်းပဲ။ အဲဒီမှာ ချစ်ကောင်းကလည်း ဝင်ပါတတ်တယ်။
“ဟာ ၈၈ တုန်းကဆို ကျနော်ကိုက လမ်းမှာ ကင်းစောင့်တာဗျ။ ပြီးတော့ ထမင်ထုပ်တွေ လိုက်ဝေတာ” အဲဒီလို အာပေါင်အာရင်း သန်သန် ပြောပြီဆိုရင် ဖောက်ချင်တဲ့ တယောက်ယောက်က “၈၈ တုန်းက မင်းက ဘယ် အရွယ်တုန်း” လို့ မေးလိုက် “၃ နှစ်” လို့ပြန်ဖြေလိမ့်မယ်။ သူများတွေ ဝိုင်းရယ်ပေမယ့် လျှော့မယ်တော့ မထင်နဲ့။ “၃ နှစ်ပေမယ့် ကျနော် အားလုံးမှတ်မိတယ်” လုပ်သေးတာ။
တခါလည်း ဘောလုံးပွဲစုကြည့်ကြရင်း သူက အိပ်ပျော်သွားရော ... ဘယ်ပွဲလဲတော့ မမှတ်မိဘူး။ ထားပါတော့ အာစင်နယ်နဲ့ မန်ယူပေါ့လေ။ ဥပမာ မန်ယူက နိုင်သွားတယ်ဆိုပါတော့ မနက်မှာ တယောက်က ပြောင်းပြန် အာဆင်နယ်နိုင်သွားတာ၊ ဘယ်လိုကန်လိုက်တာ၊ ဘယ်လိုဝင်သွားတာ ဆိုပြီး သူ့ရှေ့မှာ ပြောလိုက် ... မကြာဘူး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လည်း ရောက်ရော အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ အာစင်နယ်ထဲက ဘယ်သူက ဘယ်လို အနိုင်ဂိုးကို သွင်းလိုက်တာဆိုပြီး လျှောက်ပြောနေလိမ့်မယ်။ တကယ်ကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေတောင် ငါတို့များ မှားသလား ထင်ရအောင် လုပ်တတ်တယ်။
အဲဒီကောင်က အဲဒီလို ရွှီးတတ်ပေမယ့် သူ့မှာလည်း ချစ်စရာ အကွက်လေးတွေရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို ခင်ကြတယ်။
အဘွားမိ အိပ်ရာထဲလဲတော့ အာကြီးနဲ့ ချစ်ကောင်းပဲ မအိပ်မနေပြုစုကြရတာပါ။ ချစ်ကောင်းဆိုရင် အလုပ် တဘက်နဲ့ အမေကို ပြုစုတာ။ အာကြီးလည်း ထို့အတူပဲ ... မွေးစားသား သမီးတွေလို့တောင် မထင်ရဘူး။ တကယ်ဆို အဘိုးပါ ဆုံးကတည်းက သူတို့မှာ ဘာဝင်ငွေမှ ရှိတော့တာ မဟုတ်ဘူး။ အာကြီးနဲ့ ချစ်ကောင်းပဲ ရှာကျွေးခဲ့တာလို့ ပြောလို့ရတယ်။
မနှစ်က အဘွားမိ ဆုံးတယ်။ ကျမကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကနေပဲ သတင်းမေးလိုက်နိုင်တယ်။ အဘွားမိဆုံးပြီ ဆိုတော့ သူတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အာကြီးကလည်း ကျန်းမာရေး သိပ်ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ လေးဘက်နာကော၊ နှလုံးရောဂါကော စုံနေတာပဲ။ အာကြီးကို နားနားနေနေ အလုပ်လုပ်ဖို့ ကျမတောင် အကြံပေးဖူးတယ်။ အာကြီးက ကျမ သားကြီးကိုလည်း ထိန်းပေးဖူးတယ်။ အာကြီးတို့နဲ့ တရပ် ကွက်ထဲ အကြာကြီး အတူနေခဲ့ဖူးတယ်။
အာကြီးက အရမ်းလည်း ရိုးတယ်။ ဂတ်စ်မီးဖိုနဲ့ ချက်ဖို့ ပြောရင် နားမထောင်ဘူး ... သူကြောက်တယ် တဲ့။ ဘယ်လောက် ပင်ပမ်းပင်ပမ်း၊ ဘယ်လောက်ဈေးကြီးကြီး မီးသွေးနဲ့ပဲ ထမင်းဟင်းတွေ တအိုးပြီး တအိုး ချက်တယ်။ သူက စေတနာကောင်းတော့ ဟင်းတွေလည်း ကောင်းတယ်။ ကျမအလုပ်က သူငယ်ချင်းတွေ၊ စာရေးဆရာ ဆရာမ အဖွဲ့တွေ သန်လျင်လာရင် ကျမက သူ့ဆီကပဲ ထမင်းဟင်းတွေ မှာကျွေးလေ့ ရှိတယ်။ ဈေးအရမ်းသက်သာတော့ သူငယ်ချင်းတွေ သဘောကျတယ်။ ကျမတို့ သန်လျင်ကို လာလည်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေထဲမှာ အာကြီးရဲ့ ထမင်းဟင်း မစားဖူးတဲ့သူ မရှိသလောက်ဘဲ။
ခရစ္စမတ်မတိုင်ခင်က ချစ်ကောင်းက ကျမကို ဂျီတော့ကနေ လှမ်းပြောတယ်။ “အာကြီး ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်” တဲ့။ ကျမ တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူး။ သတင်းပဲ လှမ်းမေးနိုင်တယ်။ နောက်တော့ မကြာဘူး ဆေးရုံက ပြန် ဆင်းရပြီ၊ ကောင်းနေပြီ တဲ့။ တော်ပါသေးရဲ့။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ အာကြီး ညက ဆုံးပြီ တဲ့။ ကျောင်းလမ်းအိမ်ကနေ ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီ ဘုရားရှိခိုးပြီး ချမယ် တဲ့။ အာကြီးအိမ်နဲ့ တအိမ်ကျော်က ကျမ ယောင်းမကို လှမ်းမေးမိတယ်။
“အာကြီးက ခရစ္စမတ်တုန်းက သီချင်းတွေတောင် လိုက်ဆိုနေသေးတာ၊ မုန့်တွေလည်း အစုံစားတာပဲ။ မနေ့ ညကတော့ ဝမ်းအမည်းတွေသွားပြီး ပျော့ကျသွားတာ ... ပြန်မထူလာတော့ဘူး” လို့ ယောင်းမလေးက ပြောပြတယ်။ ကျမ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူး။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် အာကြီးဆိုတာကို မအေးမြင့်ဆိုတဲ့ နာမည်တလုံးကလွဲရင် ကျမတို့ ဘာမှ မသိဘူး။ သူ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမအရင်းအချာ၊ ဆွေမျိုး ဘယ်သူလဲ၊ သူ ဘယ်ကလဲ၊ သူ့မိဘအရင်းတွေ ဘယ်သူလဲ ဘယ်သူမှ မသိဘူး။ သိကောင်းသိခဲ့မယ့် သူ့မွေးစား အမေကော အဖေပါ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီလို မသိတော့ကော ... ဘာမှ တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ကို ဘုရားကျောင်း အသိုင်းအဝန်းက ကောင်းကောင်း သင်္ဂြိုဟ်မှာပါ။ သူ့အသက်က ၄၅ နှစ် တဲ့။ အရွယ်ကောင်း၊ အိမ်ထောင်လည်း မရှိ။ သားသမီးမရှိ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်ကုန်ခါနီးအချိန်မှာ ... အာကြီး သေသွားပြီ။ ကျမတို့ ပြန်မတွေ့နိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့။
မရေးတာကြာတဲ့ ဘလော့စာမျက်နှာလေးကို ပြန်ဖွင့်မယ်လို့ ကြံချိန်မှာ အဲဒီသတင်းကို ကြားလိုက်ရတာနဲ့ပဲ မှတ်မိနေတဲ့ မိသားတစုအကြောင်း ရေးလိုက်မိတာပါ။ အပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ အဘိုးပါအကြောင်း၊ ချစ်ကောင်းနဲ့ အာကြီးသုတ် အကြောင်းတွေ ကျမ ရေးခဲ့ဖူးတယ်။
အာကြီးတယောက် “ဘုရားသခင်ရဲ့ ရင်ခွင်တော်မှာရင်ငွေ့ကို လှုံရင်း ငြိမ်းချမ်းသာယာနိုင်ပါစေ”
Wednesday, December 30, 2009 | Labels: အမှတ်တရ |
This entry was posted on Wednesday, December 30, 2009 and is filed under အမှတ်တရ . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.